एसिड र छुरा प्रहारबाट फेरि युवती गम्भीर घाइते « Pahilo News
एसिड र छुरा प्रहारबाट फेरि युवती गम्भीर घाइते
प्रकाशित मिति : 25 September, 2018 11:04 am
काठमाडौ, ९ असोज । नवलपुरमा एक युवतीमाथि एसिड र छुरा प्रहार भएको छ ।
कावासोती नगरपालिका ९ डण्डा बजारकी २७ वर्षीया बसन्ती परियारलाई छिमेकीले नै एसिड र छुरा प्रहार गरेपछि गम्भिर घाइते भएकी छिन । उनी अहिले भरतपुर अस्पतालमा मृत्युसँग लडिरहेकी छन् । उनको अवस्था गम्भिर रहेको चिकित्सक डा. सुरेश प्रधानले जानकारी दिए ।
देव्रे छातीमा प्रहार भएको चक्कु करङ छेडेर फोक्सोको नजिक पुगेको डा. प्रधानले बताए । अन्य स्थानको घाउ भन्दा यो गम्भिर हेको डा. प्रधानले जानकारी दिए । देव्रे तर्फको पेटमा छुरा प्रहार हुँदा सानो आन्द्रा बाहिर निस्किएको छ ।
बसन्तीमाथि एसिड प्रहार गर्ने विमल शिर्पालीलाई नवलपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनले प्रहरीसामू अपराध स्वीकार गरेका छन् ।
योजनाबद्ध रुपमा बसन्तीमाथि एसिड प्रहार गरेको देखिएको नवलपुरका प्रहरी प्रमुख रमेश थापाले जानकारी दिए ।
यता दुई सन्तानकी आमा बसन्ती मृत्युसँग लडिरहेकी छिन । बसन्तीका श्रीमान यमनारायणले विमलमाथि फाँसीको सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । एसिड आक्रमणमा परी रौतहटकी किशोरी सम्झना दासको मृत्यु भएको खबर सेलाउन नपाउँदै फेरि बसन्तीमाथि एसिड प्रहार भएको हो ।